Waxbarashada Nabadda ee AFRICA: Qalab aan Xad -gudub ku ahayn Afrika - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Dada oo 15 jir ah iyo gabadheeda Hussaina oo ku sugan hoy ay deggen yihiin bulshada ku nool Maiduguri, Gobolka Borno, Nigeria. Dada waxay jirtay 12 sano markii Boko Xaraam ay qaadatay iyada iyo walaasheed ka weyn. (PHOTO: UNICEF/Ashley Gilbertson VII)
(Waxaa daabacay: Diblomaasiyadda Casriga ah. May 19, 2021)
By Tamsel Aqdas
Adduunka oo dhan, isbeddelka bulshada xagga horumarka iyo nabadda waarta waxay la xiriirtaa kacdoonno rabshado wata. Inkasta oo dooddu ay tahay mid sax ah ilaa xad, haddana dhaqammada aan rabshadaha lahayn waxay xambaarsan yihiin awoodda keenidda natiijo la mid ah. Dhaqanka aan rabshadaha lahayn wuxuu ku taamayaa inuu si tartiib tartiib ah wax uga beddelo fikirka shakhsiyaadka, taasoo keenta xallinta ama beddelidda khilaafaadka ku baahsan bulshada. Qaabkan, wax -ku -ool dheeraad ah ayaa lagu gaaraa, maaddaama silica ballaaran la dhinac maray.
Marka laga hadlayo Afrika, dawladihii gumaysiga ka dib waxay isku arkeen khilaafyo u dhexeeya xiisad u dhexaysa qowmiyadaha iyo iskahorimaadyada u dhexeeya gobollada. Si la mid ah, Afrika waxaa loo hoosgeeyay burbur dhaqaale iyo kaabayaal, oo ay weheliso burbur bulsheed iyo maskaxeed shaqsiyaadka. Sidaas darteed, waxaa soo baxay tirooyin aad u badan oo qaxooti ah iyo dad gudaha ku barokacay oo u baahan hoy, ilaalin, iyo masruuf, kuwaas oo ka dhashay saamayn caalami ah. Arrimahan oo kale ayaa saadaaliyay baahida taageerada muhiimka u ah dadka nugul, barakacayaasha ah, iyo bulshada la hayb sooco ee Afrika. Si kastaba ha ahaatee, si loo xaddido dhiiga daadanaya iyo dhibaatada bulshada Afrika, tallaabooyinka lagu daray waxay ahaayeen kuwo aan rabshad lahayn.
Si loogu daro doodda aan rabshadaha lahayn, baraha caanka ah Maria Montessori mar bay si habboon u tidhi, “nabad-dhisiddu waa shaqada waxbarashada. Dhammaan siyaasaddu waxay samayn kartaa inay naga reebto dagaalka ”. Iyagoo tilmaamaya sida waxbarashadu asal ahaan u beddesho maskaxda shaqsiyaadka isla markaana u jeexdo waddo nabadeed. Isku-darka waxbarashada si loo hubiyo bulsho nabdoon ayaa hoos timaadda falalka aan rabshadaha lahayn, fikraddanna waxaa la jaanqaaday dawlado kala duwan oo Afrika ah. Sida, shir shir Wasiir ah oo ku saabsan colaadaha ka dib iyo dawladaha jilicsan Kulankaas, ayaa waxaa lagu saxiixay war-murtiyeed u dhexeeya 2004 dowladood oo Afrikaan ah, waxaana lagu sameeyay Node Quality Interde on Education Peace (ICQN-PE). Middaas, wasiirrada waxbarashada ee dowladaha Afrika waxaa laga rabay inay nidaamkooda waxbarasho u rogaan hay'ado ciidan, si kor loogu qaado dhisidda nabadda, ka-hortagga khilaafaadka, xallinta khilaafaadka, iyo dhismaha qaranka. Natiijo ahaan, ICQN Peace Education waxay soo saartay qorshe istaraatiiji ah si loogu adeego sidii hay'adaha udub dhexaadka u ah kobcinta qiyamka, dabeecadaha, aqoonta, iyo xirfadaha; kuwaas oo dhammaantood gacan ka geysan doona horumarinta nabad waarta iyada oo loo marayo rabshado aan loo meel dayin shakhsiyaadka Afrikaanka ah, iyo horumarinta gobolka Afrika.
Iyadoo taas la leeyahay, ICQN waxay ujeeddooyinkeeda u kala saartay qaybo kala duwan. Marka hore, ICQN Waxbarashada Nabadda waxay ujeeddadeedu tahay inay bilowdo is -weydaarsiga iyo wada -hadalka Afrika dhexdeeda ah, taasoo dhalisay, dhiirri -gelin horumar waara iyadoo loo marayo waaxda waxbarashada. Sidoo kale, waxay xambaarsan yihiin hami ah samaynta, xoojinta, iyo hirgelinta Siyaasadaha iyo Xeeladaha Waxbarashada Nabadda. Marka xigta, hirgelinta, dabagalka, iyo qiimeynta barnaamijyada waxbarashada nabadda waa in la xaqiijiyaa. Intaa waxaa dheer, Ujeeddada Waxbarashada Nabadda ee ICQN waa in la bilaabo kartida Waxbarashada Nabadda ee dhammaan heerarka bulshada Afrika; kaas oo kobcin doona iskaashiga istiraatiijiyadeed ee isdhexgalka, gobalada, iyo iskaashiyada qaybaha kala duwan leh iyo wada shaqaynta daneeyayaal badan. Saamayn ahaan, cilmi -baaris wax -ku -ool ah ayaa la soo saari doonaa, taasoo horseedaysa wax -soo -saar aqooneed oo wax -ku -ool ah. Tani waxay horseedi doontaa horumarin siyaasadeed oo xog -ogaal ah, taas oo keenaysa hirgelinta wax -ku -oolka ah ee Waxbarashada Nabadda.
Tallaabada lagu gaarayo ujeeddooyinkaas ballaaran waxay u baahan doontaa waxqabadyada soo socda ee ICQN Peace Education. Ugu horreyn, hawlaha wada -xaajoodka siyaasadda ayaa la dhex -marin doonaa wasiirrada waxbarashada ee loo qoondeeyey, iyo dhammaan daneeyayaasha kale ee ay khuseyso ee ka imanaya dagaallada iyo meelaha ay dhibaatadu saamaysay. Habkan, falanqayn cilmi baaris oo wax ku ool ah, dukumentiyo, iyo faafinta daabacaadaha iyo ilaha waa in la sameeyaa. Sidaas darteed, waxaa si qoto dheer loo fahmi doonaa isku dhacyada, waxaana la dhiirri -gelin doonaa dhaqannada ballan -qaadka ah ee nabad -dhisidda iyada oo loo marayo waxbarashada. Waxaa intaa dheer, dadaallada lagu dhisayo kartida waxaa lagu hagaajin doonaa iyadoo la adeegsanayo daabacaadaha iyo kheyraadka la hubo, kuwaas oo lagu dari doono sidii qalab wax ku ool ah oo siyaasad wax ku ool ah iyo ku dhaqanka dhaqangelinta waxbarashada nabadda. Intaa waxaa dheer, isdhaafsiga Afrika dhexdeeda ah ee khuburo ku aaddan nabadda xagga waxbarashada waa in la fududeeyo, taas oo keenaysa in la abuuro shabakad jilayaal waxbarasho oo khibrad u leh waxbarashada nabadda oo ka socda dalalka ay colaaduhu saameeyeen. Ugu dambayn, hawl-wadeennada bulshada rayidka ah ayaa la tashanayaa oo la geliyaa geedi-socodka wada-hadalka siyaasadda, si loo hubiyo in wax laga qabto daldaloolada u dhexeeya siyaasadda iyo waayo-aragnimada dhulka. Guud ahaan, tillaabooyinkan ayaa xaqiijin doona waxbarasho nabadeed oo wax ku ool ah si loo helo nabad waarta Afrika iyada oo loo marayo rabshado la'aan.
Talo -gelinta waxbarashada nabadda ee ICQN waxaa lagu lafa -guri karaa shaqooyinkeeda Nigeria. Nigeria oo ah dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, Nigeria ayaa wajaheysa caqabado dhowr ah oo dhex mara qaab isku dhacyo ah, kuwaas oo isugu jira xiisado siyaasadeed ilaa colaado rabshado diimeed iyo kuwo qabiil. Arrimahan ka koobnaa ayaa saamayn taban ku yeeshay horumarka dalka; maadaama inta badan aan laga warhayn. Sidaas darteed, dhacdooyinka isku dhacyada ayaa aakhirkii la waafajiyay qayb ka mid ah dhaqankooda qaran. Sidaas darteed, jiilka hadda jira ayaa aqbalay khilaafaadka ama aqoon yar u leh sida loo xaliyo. Sidaa darteed, is-dhexgalka waxbarashada nabadda ee manhajyada Nigeria waxay muhiim u ahayd in la beddelo oo la kobciyo maskaxda iyo ficillada ka dhasha shaqsiyaadka, iyo in la dhiso bulsho isku duuban oo nabdoon iyada oo aan rabshado dhicin.
Caqabada ugu daran ee khuseysa Nigeria ayaa loo arki karaa inay tahay falalka argagaxiso ee koox diimeed aan waji lahayn oo loo yaqaan “Boko Haram” Waqooyiga Nigeria, iyo kooxaha mintidiinta sida “Niger Delta Avenger” iyo “Oodua People Congress” ee gobolka koonfureed ee gobolka Nigeria. Guud ahaan, kooxahani waxay saameeyeen wanaagga guud ee muwaadiniinta Nigeria. Argagixisadu waxay dhalisay xagjirnimada dhalinyarada, heerka akhris -qoraalka oo hooseeya, shaqo la’aanta, burburinta kaabayaasha dhaqaalaha, iyo hoos u dhaca dhaqaalaha. Sidaa darteed, waxaa aad loogu baahnaa in lagu daro ICQN Peace Education oo qayb ka ah manhajka qaranka; tan iyo, waxay dhalin doontaa in la xoojiyo jiilka soo socda ee khuseeya xirfadaha lagama maarmaanka u ah xallinta arrimaha bulshada, iyo ka fogaanshaha ku biirista ururada xagjirka ah. Nidaamka waxbarasho ee Nigeria, Waxbarashada Nabadda waxay ku tababari doontaa shaqsiyaadka ka fogaanshaha iyo maareynta isku dhacyada rabshadaha wata, sameynta xiriir wanaagsan oo lala yeesho dadka kale, midnimada, iyo iskaashiga u dhexeeya qabiilooyinka kala duwan. Sidaas darteed, cuqdadda, fikradaha khaldan, iyo nacaybka kooxaha is-beddelaya waa la tirtiri doonaa, taas oo keenta wada-noolaansho nabad ah/aan rabshad lahayn.
Qarnigii sagaal iyo tobnaad, Harris and Morison (2003) waxay muujisay in aasaaska aasaasiga ah ee isbeddelka bulshada iyo dib -u -habaynta ay sababeen dugsiyada, kaniisadaha, iyo kooxaha bulshada. Sidaa darteed, xagga waxbarashada, rajada laga qabo rabitaanka ardaydu inay si togan uga qaybqaataan horumarka bulshada ayaa sii kordheysa, sidoo kale waxay iska indha tiri doontaa rabshadaha iyo dagaallada. Waxaa la sameeyay in iyadoo kor loo qaadayo cawaaqibka dagaalka, ardaydu waxay horumarin doonaan awoodda lagu xallinayo khilaafaadka si aan rabshad lahayn. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijka Waxbarashada Nabadda ee ICQN aad ayaa looga baahan yahay dugsiyada hoose iyo kuwa sare ee Nigeria. Qaabkaan, ardayda waxaa lagu qaban doonaa iyagoo da 'yar oo waxaa sii kordhaya ruuxa dulqaadkooda. Tani waxay si isku mid ah u xoojin doontaa carruurta aqoonta lagama maarmaanka u ah nabadda iyo xirfadaha ay wax uga qaban karaan arrimaha iyada oo aan loo adeegsan rabshad. Barashada Waxbarashada Nabadda ayaa u saamaxaysa dhallinyarada inay noqdaan muwaadiniin wanaagsan oo si wanaagsan ula dhaqma qaranka.
Nidaamka waxbarasho ee Nigeria, waxyaabaha ugu waaweyn ee ku dhex jira mabaadi'da aan rabshadaha lahayn ee Waxbarashada Nabadda ee ICQN ayaa u socda sida soo socota. Marka hore, ardayda waxaa la baraa inay ixtiraamaan dhammaan xuquuqda iyo karaamada dadka kale. Tan waxaa ku jira dhammaan diimaha, dhaqamada, qowmiyadaha, iyo isirka. Rajada xad -dhaafka ah iyada oo loo marayo tan ayaa ah in la xaliyo khilaafaadka diimeed, qowmiyadeed iyo dhaqan ee ka dhex jira. Ixtiraamka xuquuqda qof kasta oo bulshada ka tirsan, iyada oo aan loo eegin asalka ay ka soo jeedaan ayaa yareyn kara isku dhacyada. Ku darsoo, rabshad-la'aan ayaa la dallacsiiyaa iyada oo la helo caddaalad iyada oo la qanciyo oo la fahmo. Iyada oo loo marayo caddaalad, shaqsiyaadka ku nool Nigeria ma yeelan doonaan sabab ay ku kiciyaan isku dhacyada ama u sii kordhiyaan. Intaa waxaa sii dheer, wadaagista iyo kobcinta dabeecadaha iyo xirfadaha wada noolaanshaha wada noolaanshaha ayaa la dhiirrigeliyaa, waxay soo afjari doontaa ka -saarista iyo dulmiga shaqsiyaadka qaarkood ee bulshada Nigeria, taasoo keenta isku -duubnaan. Ardayda waxaa la baraa inay dhegeystaan ​​oo fahmaan iyagoo qof walba siinaya fursad ay wax ku bartaan oo ay kula wadaagaan socodka lacag la'aanta ah. Tani waxay ardayda bari doontaa dulqaadka iyo wadajirka, waxayna qaddarin doonaan oo aqoonsan doonaan in dhammaan shakhsiyaadka bulshada ka tirsan ay yihiin kuwo gaar ah oo ku kala duwan habkooda iyo in qof walba uu haysto wax uu ku biirinayo bulshada iyadoon loo eegayn isirkooda, luqaddooda, diintooda, ama dhaqankooda. Intaas waxaa sii dheer, sinnaanta ragga iyo dumarka ayaa la baraa, iyadoo la hubinayo in ragga iyo haweenku u siman yihiin dhismaha dawladda. Natiijo ahaan, isku dhacyada u sii gudba dhinaca takoorka jinsiga waa in la aqoonsadaa waxayna u gudbi doonaan xallinta. Ugu dambayn, ardayda waxaa la baraa inay talo ku leeyihiin hannaanka go'aan-qaadashada ee dawladda iyo bulshada ay ku nool yihiin. Qaabkaas, waa inay ku lug yeeshaan dhiirrigelinta dulqaadka iyo nabadda bulshada; sida, waxay ku imaan doonaan xaqiiqda ah in wax -ku -biirintoodu ay muhiim tahay. Si loo gaaro hadafka Waxbarashada Nabadda, gaarsiinta qalabka ee ku wajahan horumarinta waxyaabaha aasaasiga u ah Waxbarashada Nabadda oo ay weheliso aqoonta, xirfadaha, iyo qiyamka la socda dhiirrigelinta dhaqanka guud ee nabadda ee ardayda, ayaa loo baahan yahay. Tani waxay keenaysaa in dadka dhexdooda laga dhex abuuro dhaqan nabadeed.
In kasta oo Nigeria ay aad uga fog tahay inay hesho saamigeeda ku habboon ee nabadda iyo wada-noolaanshaha bulshada, dhaqanka aan rabshadaha lahayn ee Waxbarashada Nabadda ayaa xaqiijisay tillaabooyin loo qaaday dhinacaas.
In kasta oo Nigeria ay aad uga fog tahay inay hesho saamigeeda ku habboon ee nabadda iyo wada-noolaanshaha bulshada, dhaqanka aan rabshadaha lahayn ee Waxbarashada Nabadda ayaa xaqiijisay tillaabooyin loo qaaday dhinacaas. Haddii Waxbarashada Nabadda ee ICQN si wax ku ool ah looga hirgeliyo dhammaan gobollada Nigeria, yoolka ugu dambeeya waa in la gaaraa. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah talooyinka lagu xoojinayo geeddi -socodka ayaa u socda sida soo socota. Marka hore, waa in la xoojiyaa tababarka iyo dib -u -barashada macallimiinta. Qaabkan, macallimiinta waxaa loo oggolaan doonaa inay helaan xirfadaha iyo aqoonta loo baahan yahay si loo adeegsado farsamooyinka iyo hababka habboon, ee si wax ku ool ah u bara oo kor ugu qaada Waxbarashada Nabadda ee ICQN. Intaas waxaa sii dheer, waxa ku jira manhajka barashada Cilmiga Bulshada waa in la yareeyaa oo waa in la qaataa habka dib -u -habaynta. Tani waa sababta oo ah Waxbarashada Nabadda ayaa laga yaabaa inay culeys ka saarto nuxurka manhajka Barashada Bulshada. Markaa, hagaajinta waxyaabaha kale waa in loo sameeyaa si waafaqsan. Ugu dambayn, waxa ku jira manhajka barashada Cilmiga Bulshada sida hadda ku jira dugsiyada sare waa in dib loo eego. Tani waa sababta oo ah fikradaha u hoggaansan fikradaha Waxbarashada Nabadda waa in la muujiyaa oo la aqoonsadaa. Intaa waxaa dheer, fikradaha ka soo horjeeda mabaadi'daas waa in laga saaraa koorsada. Sida, iska -horimaadyadu waxay jahawareerin karaan ardayda; taasoo dhalisay Waxbarasho Nabadeed oo wax ku ool ah.
Gabagabadii, Xidhiidhka Tayada Waddaniga ah ee Waxbarashada Nabadda (ICQN-PE) waxaa aasaasay Ururka Horumarinta Waxbarashada Afrika (ADEA), iyada oo rajaynaysa in la bilaabo tallaabooyin aan rabshad lahayn si loo helo nabad, wada-noolaansho, iyo horumarka gobolka Afrika, kaas oo ay ka buuxaan khilaafyo dhexdhexaad ah, oo khuseeya diinta, qowmiyadda, diinta, iwm. jiilka, si looga dhigo kuwo dulqaad badan oo nabdoon. Ujeeddada xad -dhaafka ah waxay ahayd in la beddelo bulshada iyada oo aan loo adeegsan rabshad, taas oo Nigeria iyo dowladaha kale ee Afrika ay bilaabeen tallaabooyin ku aaddan waddadaas.
Jidka Nabadda Waxbarashada: Nabadda iyo Rabshadaha ka yimaada dhinaca Carruurta
Siyaasad-dejiyeyaasha waxbarashada Belarusiyaanka waxaa loo tababaray isku-dhafka xuquuqda aadanaha nidaamka waxbarashada
August 30, 2018 Warbixinnada Waxqabadka 0
Qaababka loo mideynayo arrimaha xuquuqul insaanka ee nidaamka waxbarashada ee Belarus waxay diiradda saartay aqoon isweydaarsi loo qabtay khubaro reer Belarus ah oo ku saabsan horumarinta siyaasadda waxbarashada iyo qorsheynta, kaas oo ka dhacay Minsk 22 ilaa 24 Ogosto 2018.
Sheekooyinka Nabadda-Dhisidda - isku xirka carruurta iyo dhallinyarada fikradaha dhismaha nabadda
March 9, 2017 CV, Dhalinta diirada la saaray 0
Sheekooyinka nabad-dhisidda waa sheekooyin dhisaya rajo iyo nabad quluubta iyo maskaxda oo loola jeedo in lala wadaago gaar ahaan carruurta. Mawduucyada sheekadu waxay ka tarjumayaan sinnaan la'aanta qaabdhismeedka ah ee halkii laga sii wadi lahaa cynicism, cabsida ama rajo beelka waxay si ula kac ah dib ugu soo jeedinayaan feejignaanta dhisida rajada waxayna soo bandhigayaan habsocod la'aan, geeddi-socod nabadeed iyagoo siinaya habab fudud oo loogu talagalay abuurista xalal khiyaali ah, aan xasilooneyn, wada jir ah. Hal sheeko, Donald the Drake, ayaa loo qoray jawaabta hubin la'aanta ku saabsan mustaqbalka geeddi-socodka dimuqraadiyadda Mareykanka gudihiisa iyo saameynta ka dhalan karta nabadda adduunka. Waxay diiradda saareysaa dareenka marka la baarayo sida muwaadiniintu ugu soo saari karaan waxa ugu wanaagsan hoggaamiyeyaashooda la soo doortay qaabab nabdoon, oo aan rabshad lahayn halkii ay u oggolaan lahaayeen cabsida inay sheegto fikirka iyo ficilka. [sii wad akhriska…]
La Dagaalanka Boko Xaraam Waxbarashada Nabadda (Nigeria)
June 2, 2017 Warar & Muuqaal, Siyaasadda 1
Dowladda Plateau waxay soo bandhigtay waxbarashada nabadda ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare si looga hortago soo noqoshada Boko Haram iyo wax ka qabashada halista xag-jirnimada ee carruurta iyo dhallinyarada. [sii wad akhriska…]